‘कलाकारितामा लाग्दा बुबाआमालाई केही दिन सकिनँ’ access_timeभदौ २६, २०७८
फिल्म क्षेत्रमा गर्व गर्न लायक सीमित निर्देशक छन् । तीमध्येमा पर्छन् मनोज पण्डित । उनले भलै दर्जनौँ फिल्म दिएका नहोलान्, जति फिल्म दिएका छन्, राम्रो क्याटागोरीमा गनिएका छन् । ती फिल्म फरक त छन् नै, विद्रोही र चेतनाको दृष्टिले समेत सबल मानिएका छन् । उनका हरेक फिल्ममा ...
काठमाडौँमा ट्रक भित्र्याउने सरदार, जसले उपत्यकाको अनिकाल टारे access_timeभदौ २६, २०७८
पहिलोपल्ट काठमाडौँ टेक्दा सरदार प्रितम सिंहमा ठूलो अत्यास थियो । त्यतिबेला उनी २३ वर्षका लक्का जवान थिए । यो विसं २०१५ तिरको कुरा हो; जतिबेला त्रिभुवन राजपथको निर्माण चलिरहेको थियो । २०१३ देखि नै साना सवारीहरू चल्न थालिसकेका थिए । तर, सडक साँघुरा भएकाले ठूला सवा...
रेडियो नेपालले नपत्याएको व्यक्ति म access_timeभदौ १९, २०७८
आलोक श्री नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा भर्सटायल र प्रसिद्ध सङ्गीतकार हुन् । राष्ट्रिय, आधुनिक होस् वा फिल्मका उनका सबै गीत हिट छन् । त्यसैले पनि सङ्गीतक क्षेत्रमा आलोकले छोए भने गीत हिट हुने मान्यता छ । नेपालका प्रेमध्वज प्रधान, दीप श्रेष्ठ, रामकृष्ण ढकाल, यम बरालदेखि ...
जेबी टुहुरे : मेरा कर्म बुबा हुनुहुन्थ्यो access_timeभदौ ११, २०७८
सानैदेखि कम्युनिस्ट विचारधारामा हुर्किएकी म उहाँको गीत ‘आमा दिदी बहिनी हो’ पनि सुन्थेँ । उहाँलाई जनवादीका अग्रज कलाकार भनेर चिन्थेँ । उहाँसँग पहिलो भेट विसं ०४६ पछि मात्र भयो । उहाँ त्यतिबेला जनसांस्कृतिक मञ्चको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । म जनवादी गीत सङ्गी...
प्रेममा अपराध करार : एकैखाले मुद्दामा कास्कीमा १० वर्ष जेल, जाजरकोटमा ३ महिना access_timeभदौ १०, २०७८
कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको न्याय सबैका लागि बराबर हुन्छ । कानुनी सिद्धान्त पनि के हो भने संविधान वा ऐनमा लेखिएको विषय जुन अदालतमा गए पनि उहीरुपमा व्याख्या हुन्छ । देशभरका ७७ वटै जिल्लामा न्यायको व्याख्या एकैरुपले हुन्छ भन्ने विधायिकी मनसाय हो । यद्यपि न्...
‘युवा परिषदमा सोर्सफोर्सको प्रमाण देखाउनुहोस्, अहिल्यै राजीनामा दिन्छु’ access_timeभदौ ७, २०७८
अहिलेका पार्टीका शीर्षनेताहरु पनि हिजो युवा नै थिए । खाली उनीहरुको निकासको ठाउँ नआएकाले लिडरसिप फ्रिज हुने स्थिति आएको हो । ३४ वर्षकी युवतीले फिनल्यान्ड चलाउन सक्छिन् भने हाम्रा युवाले सक्दैनन् भन्ने होइन । हरेक पार्टीका महाधिवेशन चल्दैछन्, त्यहाँ युवाले सशक्त...
एक ‘फुलटाइमर’ ब्लड डोनरको कथा : रगतका लागि भौँतारिनुपर्ने दिनको अन्त्य कहिले होला ? access_timeभदौ ७, २०७८
२०३८ सालतिरको कुरा हो, वीर अस्पतालको आडमा (अहिले ट्रमा सेन्टर भएको ठाउँमा) एउटा कटेरो थियो, जहाँ भरियाहरु एक–दुई सय रुपैयाँ पाउने आसमा रगत दान गर्न आउँथे । त्यतिबेला रगत दान गर्नेहरु प्रायः भरियाहरु नै हुन्थे । एक किशोर त्यही बाटो साथीहरुसँग प्रायः हिँड...
कलाकारको सम्झनामा गाईजात्राको इतिहास : कसरी भयो व्यङ्ग्यको सुरुवात ? access_timeभदौ ७, २०७८
‘गाईजात्रा’ नेवारहरूको मौलिक पर्व मानिन्छ । मृतकको सम्झनामा गाई, झाँकी, व्यङ्ग्य, प्रहसनलगायत प्रदर्शन गर्ने दिन भनेर गाईजात्रा बुझ्ने गरिन्छ । तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले छोराको शोकमा रहेकी पत्नीको मन शान्त पार्न यो चलन चलाएका थिए । उनले युवराज मात्र...
ओली–नेपाल सम्बन्धको पहेली ! access_timeभदौ ३, २०७८
माले–एमाले विभाजनको घाउ २४ वर्षपछि फेरि बल्झिएको छ । नेकपा एमाले बुधबारदेखि औपचारिकरुपमा फुटेको छ । केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबीचको सहयात्राले ५० वर्षमा पाइला टेक्न नपाउँदै विश्राम लिएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले १४ सांसदमाथि गरेको कारवाही ग...
‘नेविसङ्घ जन्माउनेमध्ये एक म हुँ’ access_timeसाउन ३०, २०७८
दमननाथ ढुङ्गाना बहुदलीय प्रजातन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थाका पहिलो सभामुख हुन् । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट २०४८ मा भएको आम निर्वाचनमा तत्कालीन काठमाडौँ क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर उनी प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनेका थिए । संसदीय व्यवस्था कार्य...
‘गरिबलाई त सरकारले पनि हेप्दो रहेछ’ access_timeसाउन २७, २०७८
सुर्खेत । बर्सातको महिना कहिले वर्षा हुन्छ त कहिले उखरमाउलो गर्मी । अर्कोतर्फ आगोको राप । घाम लाग्दा घाम र आगोको रापले शरीर पसिनाले निथ्रुक्क भिजेको हुन्छ छ भने वर्षा हुँदा पानीले । हत्केला कलेटी परिरहेका हुन्छन्, मुहारमा कोइला र खरानीको दाग । बेचैन शरीरले यिनै अवस्...
आमासँग रिसाएर घर छाडेकी किशोरी २० हजार भारुमा बेचिइन् access_timeसाउन २६, २०७८
१६ वर्षीया गृष्मा (नाम परिवर्तन) कक्षा ८ मा पढ्दै थिइन् । मोरङ स्थायी घर भएकी उनको परिवारले चिया नास्ताको पसल सञ्चालन गर्थे । बुवा, आमासँगै उनी पनि त्यही चिया पसलमा काम गर्थिन्, परिवारको रोजीरोटी चलिरहेकै थियो । तर गत वैशाख ९ गते उनी एकाएक घरबाट गायब भइन् । ९ गते...
आरक्षण विवाद : सर्वोच्चको फैसलाबारे के भन्छन् विमल कोइराला र मोहना अन्सारी ? access_timeसाउन २२, २०७८
सर्वोच्च अदालतले गरेको आरक्षणसम्बन्धी फैसला यतिबेला बहसमा छ । फैसलाको समर्थन र आलोचनामा विभिन्न टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नयाँ वर्ग विश्लेषण गर्दै उच्च वर्ग र तरमारा मध्यम वर्गलाई आरक्षण प्रदान गर्न नहुने भनेको छ । यसै क्रममा हामीले फैसलाबारे पूर्व मुख्यसचि...
सर्वोच्चको वर्ग विश्लेषण : ‘तरमारा मध्यमवर्ग’ बाट आरक्षणलाई मुक्त गरौँ access_timeसाउन २२, २०७८
जनकपुर स्थायी घर भई ललितपुरमा बस्दै आएका मधेसी समुदायका युवा विनयकुमार पञ्जियारले चिकित्सा शास्त्रमा एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका छन् । जब उनले स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका लागि २०७७ भदौ ३१ गते प्रकाशित सूचना हेरे, त्यसमा संविधानअनुसार जातीय क्लस्टरहरुलाई आरक्षण सिटको प्रवन्...
कलाकारिताको एउटै पुरस्कारबाट काठमाडौँमा घर ! access_timeसाउन १६, २०७८
नेपाली कलाक्षेत्रका सफल कलाकार हुन् हरिहर शर्मा । नाटक, सिरियल होस् वा चलचित्र, सबैतिर उनको अभिनय देख्न सकिन्छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट २०३० सालदेखि कलाकारिता सुरु गरेका उनी अहिले पनि यही कर्ममा छन् । अभिनयकर्मबाटै विभिन्न अवार्डका साथमा गोरखा दक्षिणबाहु, त्...
जो प्रेममा परेकै छैन, उसैका गीतमा प्रेमपीडा धेरै ! access_timeसाउन १४, २०७८
‘छुट्नलाई पो रैछ क्यारे तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको सम्झी सम्झी रुनु छैन पो सानु खुसीले कुनै पल आँसु खसेको’ करिब एक​ वर्षअगाडि बजार तताएको यो गीत अहिले पनि त्यतिकै लोकप्रिय छ । थानेश्वर गौतमले सङ्गीत दिएको गीतमा थानेश्वर र शान्तिश्रीको स्वर छ ।...
‘नेताभन्दा कलाकारले देश राम्ररी हाँक्न सक्छन्’ access_timeसाउन २, २०७८
नवल खड्का चलचित्र क्षेत्रमा नायक÷निर्माताको रूपमा परिचित छन् । थुप्रै फिल्मका नायक रहेका उनी अब निर्देशकका रूपमा पनि अगाडि आउने तरखरमा छन् । आफैँले बनाउन लागेको फिल्म ‘काँडेतार’ उनले नै निर्देशन गर्दैछन् । चलचित्र कलाकार सङ्घ, चलचित्र निर्माता सङ्घ नेप...
‘आफ्नो परिवार नियोजनको अपरेसन आफैँले गरेँ’ access_timeअसार २६, २०७८
चिकित्सा पेसामा स्थापित व्यक्तित्व हुन् प्राडा अर्जुनदेव भट्ट । कैयौँलाई मृत्युको मुखबाट फर्काउन सफल उनी प्रसिद्ध युरोलोजिस्टका रूपमा परिचित छन् । पाल्पामा जन्मिई एमडी, पीएचडी (सर्जरी), डीएससी (युरोलोजी), एफआईसीएस र मिर्गौला प्रत्यारोपण फेलोसिप अध्ययन पुरा गरे...
​गिरिजाबाबुसँगको पहिलो भेट, संक्रमणकालको भित्रीकथा access_timeअसार १९, २०७८
हामीले जनयुद्ध सुरु गरेको ५ बर्ष नपुग्दै सबै राजनीतिक नेताहरुसँग वार्ता र संवादको प्रकृया सुरु गरेका थियौं । स्वभावैले पहिलो कुराकानी कम्युनिष्ट नेताहरुसँग नै हुने परिवेश थियो र त्यहीअनुसार नै हामीले कुरा ग-यौं । चाहे त्यो सिलगुडीमा होस् चाहे लखनउमा होस् । चाहे पट...
‘काँग्रेस पार्टी हाँक्न सक्छु ’ access_timeअसार १९, २०७८
चित्रलेखा यादव नेपाली काँग्रेसकी नेत्री हुन् । विद्यार्थी जीवनदेखि नेविसङ्घ हुँदै नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा होमिएकी यादवको पार्टीभित्र राम्रो छवि रहेको छ । पञ्चायतविरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको समेत अनुभव भएकी उनी अहिले नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् । २०५७/०५८ ...